बिहेको दुई महिना नबित्दै श्रीमती पहिलेको बोयफ्रेन्डसङ्ग टाप ! २५ लाख सम्पत्तिसहित हिंडेको आरोप ? | Public 24Khabar
Home News बिहेको दुई महिना नबित्दै श्रीमती पहिलेको बोयफ्रेन्डसङ्ग टाप ! २५ लाख सम्पत्तिसहित...
बिहेको दुई महिना नबित्दै श्रीमती पहिलेको बोयफ्रेन्डसङ्ग टाप ! २५ लाख सम्पत्तिसहित हिंडेको आरोप ?
भैरहवा : गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा दोस्रो टर्मिनल भवनको निर्माणको तयारी सुरु गरिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसको तयारी अघि बढाएको हो । विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार टर्मिनल भवनको डिजाइनदेखि संरचना निर्माणका सबै काम मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ ।
आगामी डिसेम्बरसम्म डिजाइन स्वीकृत, ग्लोबल टेन्डरको प्रक्रिया सक्नेगरी तयारी भइरहेको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताउनुभयो । दोस्रो टर्मिनल भवन बुद्ध कला र संस्कृति झल्किने गरी निर्माण गर्ने सोच सरकारको रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।,याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।
Previous articleBreaking – सोच्नै नसकिने गरि घट्यो प्याजको मुल्य !
Next articleभर्खरै घ’टनाले लियो नयाँ मोड, अस्पतालका डाक्टरले नै यस्तो भने, हेर्नुहोस् पुरै नालीबेली यस्तो